बबिता घिसिङ२६ माघ २०७२, मङ्गलवार
बौद्ध, माघ २५ गते
बौद्धनाथ क्षेत्रबिकास समितिको मुख्य प्रायोजनमा सोमबार बौद्धमा तामाङहरुलाई राजनितिमा जनचेतना जगाउने उद्देश्य सहित राजनितिमा तामाङ, तामाङ लैङ्गिकता र तामाङ भाषा र शिक्षा लगाएत विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
राजनितिमा तामाङ हिजो आज र भोली विषयको अन्तरक्रियाका वक्ताका रुपमाडा. गवणेश योञ्जन, बुद्धछिरिङ मोक्तान र सितारामतामाङ लगायत रहेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिताराम तामाङले तामाङहरुको मुद्धा र राज्यपुनःसंरचनाको विषय अझै पनि जहाँको त्यही रहेको धारण राख्नु भएको छ । उहाँले राजनितिमा तामाङ नआए सम्म तामाङहरुको उन्नति नहुने भएको हँुदा तामाङ राजनितिमा आउनु अपरिहार्य रहेको दाबी समेत गर्नु भयो । जवसम्म ताम्सालीङ आँउदैन तव सम्म तामाङहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने जानाकारी समेत दिनुभयो ।
अन्तरक्रियाका अर्का वक्ताडा. गणेश योञ्जनले तामाङहरुले राज्यपूनः संरचनाको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको बताउनु भयो । त्यस्तैगरी डा. योञ्जनले तामाङहरुमा ताम्सालीङले धेरै भूमि ओगटेको छ भन्ने बुझाई नै गलत रहेको समेत राख्नु भयो । उहाँले आदिवासी जनजातिहरु २४० वर्ष देखी हेपिदै र पिल्सीदै आएको र जसले गर्दा तामाङको कुनै प्रकारको उपलब्धी हुन नसकेकोमा जोड दिनु भयो । उहाँले छलफल र बहसबाट नै तामाङलाई एकताबद्ध गर्न सकिनेमा पनि जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा बुद्धछिरिङ मोक्तानले अहिलेको नयाँ संबिधानमा समेटेको संघियतालाई पनि अहिलेका राजनैतिक नेताहरुले उल्टाउन कुनै कसर नछोड्ने र यसले तामाङ जातिलाई फाईदा नहुने ठोकुवा गराउनु भयो । उहाँले ताम्सालीङ राज्यनिर्माणको सन्दर्भमा सांस्कतिक पक्षलाई अंगाल्नु पर्नेमा विशेष जोड दिनु भयो ।
महोत्सवमा तामाङमा लैङ्गिकता विषयमा अन्तरक्रिया पनि भएको छ । वक्ताको रुपमा स्रमिकलामा र आशातामाङ रहेका छन् । आशातामाङले नेपाल सरकार कमलरी प्रथालाई अन्त्यगर्न धेरै प्रयास गरीरहे पनि खाडी मुलूकमाभने महिलाहरुले पठाइनै रहेको छ भन्ने विषयमा विपति जनाउनुभएको छ भने अर्का वक्ता स्रमिकलामाले छोरीलाई पनिवंश हस्तान्तरण गर्ने अधिकार दिइनु पर्छ भन्नेमाजोड दिनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तामाङ भाषा र शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया पनिभएको छ । वक्ताको रुपमा भने भाषाबिद् अमृत योञ्जनतामाङ र सहजकर्ता इन्द्र तामाङ रहेको छ । योञ्जनले तामाङ भाषाले महिला र पुरुष भनेर बिभेद नगरेको बताउनु भयो । भाषा लोपभयो भने ज्ञान पनिलोप हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनिजोड दिनुभयो ।
३ दिने ल्होछार ज्ञान महोत्सव २०७२को दोस्रो दिन अन्तरक्रिया कार्यक्रमका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण समेत भइरहेको छ । त्यस्तै गरी तामाङ पुस्तक, तामाङ भेषभूषा लगायतका स्टलहरु रहेको छ ।
अन्य सामाग्रीहरु बबिता घिसिङ
२८ जेठ २०७४, आइतवारबबिता घिसिङ
१० जेठ २०७४, बुधवारबबिता घिसिङ
७ मंसिर २०७३, मङ्गलवारबबिता घिसिङ